Wakiilka Rooney oo Shiinaha ku maqan isaga oo heshiis u raadinaya | Kobciye24.com
Wakiilka Rooney oo Shiinaha ku maqan isaga oo heshiis u raadinaya
Feb 23, 2017 - jawaab
Wakiilka Wayne Rooney, Paul Stretford ayaa ku sugan dalka Shiinaha si uu u soo fiiriyo bal in uu wada xaajood u soo samayn karo ciyaaaryahankan afka hore uga dheela Manchester United si uu dhankaas ugu wareego.
Ma jirto hubanti waxayna u badan tahay in uusan wax heshiis ah soo gaari doonin maadaama oo suuqa ciyaartoyda ee Shiinuhu uu xirmayo 28 bishan.
Laakiin xaqiiqada ah in Stretford uu u safray Shiinaha ayaa ah tilmaan cad oo muujinaysa in tabobare Jose Mourinho uu ogol yahay in Rooney oo 31 jir ah uu kooxda isaga tago.
Haddii uusan bishan taginna waxay u badan tahay in uu koox kale u wareegi doono xagaaga.
Kabtanka England ayaa sheegay in uu ogyahay in laga danaynayo horyaalka Shiinaha ee Super League laakiin lama oga kooxaha uu la hadlayo Stretford oo ah wakiilkiisa.
Kooxda Beijing Guoan, oo la rumaysan yahay in uu taageero madaxweynaha dalka Shiinaha ayaa loo arkayay in ay ka midtahay kooxaha aadka u danaynayay saxiixashada Rooney, laakiin ilo u dhaw kooxda ayaa BBC Sport u sheegay in aysan danaynaynin sixiixashada ciyaaryahankan.
Sababta ayaa lagu sheegay qawaaniinta cusub ee xaddidaya ciyaaryahannada dalka Shiinaha dibaddiisa laga soo iibsado, Jiangsu Suning iyo Tianjin Quanjian ayaa u muuqda in ay yihiin labada kooxood ee midkood la wareegi doono ciyaaryahankan.
Arbacadii ayuu Mourinho sheegay in uusan ogayn in Rooney uu sii joogi doono garoonka Old Trafford todobaadyada soo socda.
Rooney ayaa hadda uun ku soo laabtay tababarka ka dib dhawaac soo gaaray.
Lama oga in arrintan soo korortay ay saamayn ku yeelan doonto fursaddii uu Rooney uga qayb qaadan lahaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka EFL oo ay Axadda la ciyaari doonaan kooxda Southampton.